पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डपत्नी सीतासम्मलाई सिँगार्ने दिल्लीकी अनुजा – ताजा समाचार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डपत्नी सीतासम्मलाई सिँगार्ने दिल्लीकी अनुजा
नयाँ दिल्ली। भारतको गुड्गाउँ तीव्र रुपमा विकासको फड्को मारिरहेको सहर हो। केही समय अघिसम्म गुड्गाउँ सहरको सबैभन्दा व्यपारिक सेन्टर मानिन्थ्यो, एम्बियन्स मल।
अहिले केही अन्य मलहरु बनेपछि तेस्रो ठूलो मलमा सीमित भए पनि यसको सान कमजोर भएको छैन। मलको पार्किङ मात्र एक किलोमिटर क्षेत्रफलसम्म फैलिएको छ।
एम्बियन्स मलको दोस्रो तलामा पुगेपछि देखिन्छ, हेयर एन्ड शान्ति सैलुन। त्यहीँ भेटिन्छिन्, हँसिलो चेहराकी ‍निर्देशक तथा हेयर स्टाइलिस्ट चितवनकी अनुजा श्रेष्ठ।
हेयर एन्ड शान्ति सैलुन त्यही सैलुन हो, जसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डपत्नी सीता दाहालसम्मलाई सिँगारेको छ। नेपाली र भारतीय सेलिब्रिटीहरुको नाम लिएर साध्य छैन।
१९ वर्षअघि खुलेको, भारतभर १२ ब्राञ्च फैलाइसकेको हेयर एन्ड शान्ति सैलुनले साढे २ सयलाई रोजगारी दिलाएको छ। नेपालमा दरबारमार्ग, ठमेलस्थित छाया सेन्टर, जावलाखेल, चितवनको नारायणगढमा पनि ब्राञ्च खोलिसकेको छ यो सैलुनले।
नेपालमा सबै शाखा गरेर ६० जनाले रोजगारी पाएका छन्। हेटौंडा, बौद्ध र पोखरामा नयाँ ‘ब्राञ्च’ सुरु हुँदैछन्। यसै वर्षको तिहारसम्म हेटौंडाको शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
आखिर एक सामान्य नेपाली महिला कसरी सफलताको यो बिन्दुमा पुगिन् त? नेपालमा नारायणघाट, चितवन स्थायी ठेगाना भएकी अनुजाको त्यो कथा थाहा पाउन २५ वर्षअघि फर्किनुपर्ने हुन्छ।
अनुजा सन् १९९४ मा प्लस टु पूरा गरेर नयाँ दिल्ली घुम्न पुगिन्। त्यतिबेला उनकी दिदी शान्तिले नयाँ दिल्लीमा ब्युटी पार्लर सञ्चालन गरेकी थिइन्। दिदीकै सैलुनमा अनुजाले काम गरिन्। सैलुनमा सेलिब्रिटीहरुसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो। सेवाग्राहीहरुसँग पनि सम्बन्ध बाक्लिँदै जान थाल्यो। दिदीको सैलुनमा काम गर्दागर्दै अनुजाले धेरै कुरा सिकिन्।
त्यसै क्रममा उनले फेसन डिजाइनिङको कोर्स पनि गरिन्। फेसन डिजाइनिङतिर उनको ध्यान मोडिएन। सन् १९९७ मा हेयर ड्रेसरको तालिम लिएकी अनुजलाई कताकता दिदीले अँगालेकै व्यवसायमा हात हाल्न मन लाग्यो।
नयाँ दिल्लीको साउथ एक्सटेन्सन पार्ट २ मा भाडामा १८ वर्षअघि हेयर एन्ड शान्ति सैलुन खोलियो। त्यसबेला जम्मा १५ वटा कुर्सी राखिएका थिए। अनुजाका अगाडि चुनौतीका पहाड त प्रशस्तै थिए। तर उनी डगमगाइनन्। त्यसबेला भारतीय व्यापारीले सञ्चालन गरेका अन्य सैलुन पनि थिए, उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रै थियो।
अर्कोतिर सेवाग्राहीले के कस्तो सेवा लिन चाहन्छन्? उनीहरुसँग कसरी संवाद गर्ने? भाषा र अन्य हिसाबले त्यो बुझ्न पनि समस्या हुन्थ्यो। बिस्तारै सहज हुँदै गयो। अहिले त एक पटक उनको सैलुनबाट सेवा लिएर गएका ग्राहकहरु फर्कीफर्की आउन थालेका छन्।
हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालसमेतले सेवा लिएका छन्। भारतका ठूलाठूला उद्योगपति, सेलिब्रेटीहरु यस सैलुनका नियमित ग्राहक हुन्।
अनुजाको हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा नेपाली र भारतीय दुवैले रोजगारी पाएका छन्। नयाँ स्टाफदेखि १९ वर्षसम्म यसै ठाउँमा काम गर्नेहरु पनि भेटिए।
पश्चिम बंगाल, जलपाइगुढी, भारतकी सुनीता राई चार वर्षदेखि यसै सैलुनमा काम गरिरहेकी छिन्। ‘म एकदमै सन्तुष्ट छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सेलिब्रिटीहरुसँग गफ गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ।’
१७ वर्ष हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा काम गरेका कर्साङ, दार्जीलिङका भरत थापालाई यति लामो समय बितेको पत्तै भएन। ‘मैले काफी स्ट्रगल गरेँ,’ दार्जिलिङकै लवजमा उनले भने, ‘तर यहाँको प्लेटफर्म एकदमै राम्रो छ। अनि त यहाँ सबै खालको काम गर्न पाइन्छ।’ यो सैलुनमा स्टाफहरूलाई एकै प्रकृतिमा काममा लगाइँदैन।
त्यस्तो गर्दा बोर हुन्छ, सिक्ने, अघि बढ्ने अवसर मिल्दैन भनेर फरक फरक काममा लगाइएको बताइन् सञ्चालक अनुजाले। जस्तो कि हाउस किपिङबाट काम सुरु गरेका दार्जिलिङका भरत अहिले सिनियर हेयर ड्रेसर बनेका छन्। स्टाफको मेहनत, चाहनाअनुसारको काम दिन्छिन्, सञ्चालक अनुजा।
पाँच वर्षअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा साधारण व्यक्तिका प्रवेश गरे। सेक्युरिटीलाई मलबाहिर राखेर केही सहयोगीका साथमा यो सैलुनमा छिरेका उनले पेडिक्योर, ओयल मसाज, हेयर कटको सेवा लिए। सैलुनकी निर्देशक अनुजाले सुरुमा त चिनिनन्। जाने बेलामा जब एकछिन कुराकानी भयो, त्यो बोलीले मात्र चिनिन्। ज्ञानेन्द्र गइसकेपछि भने अनुजालाई बोल्न पाएँ भन्ने मनमा लाग्यो।
बाहिर बसेका उनका सहयोगीहरुलाई सैलुनमा काम गर्ने स्टाफहरूले अगाडि नै सोधेका थिए, उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ उद्योगपति हुनुहुन्छ,’ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगीहरुले जवाफ फर्काएका थिए।
‘सबै जना नेपाली भाइबहिनीहरु हुनुहुँदो रहेछ। राम्रो सर्भिस दिनुभयो,’ सैलुनबाट निस्किने बेला टिप्स दिँदै ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘सबैले बाँडेर लिनुहोला।’
त्यस्तै प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल पनि पुगेकी छिन् यो सैलुनमा। ‘नेपाल आएर तपाईंले राम्रो गर्नुभएको छ’ भनेर तारिफ गरेको भुल्दिनन् अनुजा। ‘उहाँ निकै खुसी हुनु भएको थियो,’ अनुजाले त्यो पल सम्झिइन्।
अनुजा यस क्षेत्रमा थप ज्ञान र सिप बटुल्नका लागि सिंगापुर, ग्रिस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स लगायतका मुलुक पुगिसकेकी छन्। अलगअलग देश पुग्दा उनले हेयर स्टाइल, हेयर कट, कलरिङ, म्यानेजमेन्ट, क्लाइन्ट कन्सल्ट र सैलुनबारे नयाँनयाँ कुराको जानकारी हासिल गरेकी छन्।
स्कुल, कलेज पढ्दा यही बन्छु भन्ने अनुजाको मनमा केही थिएन। जुन लाइन समातिन्, त्यसैमा सन्तुष्ट छिन्। ‘म जहाँ छु, जे छु मेरा पति राजकुमार श्रेष्ठ र दिदी–भिनाजुलाई यसको श्रेय जान्छ,’ उज्यालो मुहार बनाउँदै उनी बोलिन्, ‘उहाँहरुकै कारण म सफल छु।’ ‘अब थप योजना के छ?’ हेयर एन्ड शान्ति सैलुनकी अनुजालाई सोधियो। ‘नेपालबाट धेरैजसो युवा पुस्ता रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भनिन्, ‘थप सैलुनहरु खोलेर रोजगारी दिलाउने इच्छा छ।’ नेपाल लाइभबाट